ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့ ကမ်းခြေထက်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ရေသူမလေး အိချောပို – Askstyle
လှပလွန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးအိချောပိုတစ်ယောက်သူမသရုပ်ဖော်ရမယ့်ရေသူမဇာတ်ရုပ်အတွက် အများကြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ကိုလည်း ရေသူမပုံစံဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ရေသူမဝတ်စုံကိုဝတ်ကာ ရေအောက်မှာလည်း ကူးခတ်ခဲ့ပါ သေးတယ်။ အနုပညာသမားပီပီ သဏ္ဍာန်လုပ်သရုပ်တူအောင် သူမက အပြတ်အသတ် လေ့ကျင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း စူစူတစ်ယောက် ရေသူမဝတ်စုံလေးနဲ့ ကမ်းခြေနဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေထက်မှာ အလှပဆုံးပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြန်မာပြည်ကရေသူမလေးဒီတစ်ခါပဲမြင်ဖူးသေးတယ်နော်။ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုဒီဇာတ်ကားလေးရောက်လာရင်လည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
သူမရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပုံရိပ်လေးတွေကို ” ‘She isamermaid, But approach her with caution. Her mind swims atadepth most would drown in.’ ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှရက်နိုင်လွန်းတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားရေသူမလေးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီနော်။
Photo – Li John Lji,CRD-MYANMAR LOAD
လှပလှနျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကိုပိုငျဆိုငျထားသူလေးအိခြောပိုတဈယောကျသူမသရုပျဖျောရမယျ့ရသေူမဇာတျရုပျအတှကျ အမြားကွီးပွငျဆငျလကေ့ငျြ့နခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ဆံပငျအရောငျကိုလညျးရသေူမပုံစံဖွဈအောငျပွောငျးလဲခဲ့ပွီး ရသေူမဝတျစုံကိုဝတျကာရအေောကျမှာလညျးကူးခတျခဲ့ပါသေးတယျ။အနုပညာသမားပီပီသဏ်ဍာနျလုပျသရုပျတူအောငျ သူမက အပွတျအသတျ လကေ့ငျြ့နတောပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာလညျး စူစူတဈယောကျရသေူမဝတျစုံလေးနဲ့ကမျးခွနေဲ့ကြောကျဆောငျတှထေကျမှာအလှပဆုံးပုံရိပျတှကေို မှတျတမျးတငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ဒီလောကျခဈြစရာကောငျးတဲ့မွနျမာပွညျကရသေူမလေးဒီတဈခါပဲမွငျဖူးသေးတယျနျော။ပရိသတျတှရှေကေို့ဒီဇာတျကားလေးရောကျလာရငျလညျးတကယျ့ကိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးမယျ့ဇာတျဝငျခနျးတှပေါမယျဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။
သူမရဲ့ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖှယျ ပုံရိပျလေးတှကေို ” ‘She isamermaid, But approach her with caution. Her mind swims atadepth most would drown in.’ ” ဆိုပွီး တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ လှရကျနိုငျလှနျးတဲ့ မွနျမာပွညျဖှားရသေူမလေးရဲ့ ပုံရိပျတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပွီနျော။